Oghere ojii ahụ nke NASA sere foto bụ n'ezie plasmoid: Martin Vrijland
Oghere ojii ahụ nke NASA sere foto bụ plasma plasma
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 3 November 2019	• 3 Comments
isi mmalite: nasa.gov
N’oge na-adịghị anya, akwụkwọ a ga-ebipụta, aga m ekwupụta banyere ihe ndị ọzọ gbasara eluigwe na ụwa dịka anyị chere na anyị hụrụ ya. Site na ihe ndi ozo, a na-atụle ihe omume nke 'oghere ojii'. NASA gosipụtara “foto” nke oghere ojii. Na vidiyo dị n'okpuru, a ga-akọwa gị otu oghere ojii a nwere ike ịbụ plasma plasma. Ọ bara uru ikiri vidiyo na vidiyo ndị ọzọ si na ọwa 'Ihe eji emegharia Thunderbolts'na-elele. More banyere akwụkwọ m na nke bu ụzọ posta. N’oge na-adịghị anya, m ga-ewetara ụbọchị nnyefe ahụ.
N’iburu n’uche na ụfọdụ iwu ebumpụta ụwa metụtara n’ime ụwa niile dịka anyị siri ghọta ya, ọ bara uru ịmụ echiche nke Immanuel Velikovsky. Atụmatụ Thunderbolts nke ndị sayensị sayensị David Talbott na Wal Thornill kọwakwuru nkọwa banyere Velikosvky ma na -adabere na nkọwa ziri ezi banyere mbido mbara ala, ihe mejupụtara, ọnọdụ okpomọkụ na ikuku nke mbara ala. Nke a bụ n'ihi na ha na-eche na n'ime mbara igwe a na-ahụ anya ọ bụghị naanị ego ike, kamakwa ụgwọ eletriki. Na nkenke, mbara ala na-akwụ ụgwọ ọkụ. Ọ bụrụ na ha abịarukwu ibe ha nso, mwepu na-ewere ọnọdụ, ka plasma wee nwee ike.
N'ime usoro usoro ihe dị ugbu a banyere ụwa niile, oghere ojii na-esite n'echiche nke Einstein nke mmekọrita nke ike ndọda, na-enweghị elele na ụwa (dịka anyị si ghọta ya) bụkwa nke eji ikike eletrik. N'ihe atụ Albert Einstein, echepụtara echiche nke 'oghere ojii'. Ihe ịtụnanya bụ na oghere ojii na nkuzi ahụ ga-adị oke arọ nke na ha na-ehulata oke na ọkụ niile. Site na nkọwa, ọkụ agaghị esite na oghere ojii dị otú a wee ghara ịhụ ya. Agbanyeghị, sayensị na-ekwu na ha ka nwere ike ịhụ mmachi n'akụkụ oghere ojii dị otú ahụ na ya mere NASA gosipụtara na 2019 foto mbụ nke na-enwu gbaa gburugburu oghere ojii.
Ozizi ịdị adị nke oghere ojii bụ nchịkọta nke hypotheses na sayensị nwere ike ijide echiche ya, n'ihi na dịka otu akụkụ nke yinye nke a sitere na echiche Einstein na-ada, ụkpụrụ ahụ dum na-amalite ịkụda mmụọ.
Agbanyeghị, oghere ojii adịghị adị. Wal Thornhill na-akọwa na ngosipụta YouTube n'okpuru ebe a na ihe NASA sere foto nwere ike ịbụ mmado plasma. Ibepu plasma plasma na etiti ala ndi eji agba oku. Nnyocha ụlọ nyocha na-egosi otu foto ahụ dị ka nke NASA wepụtara dị ka foto nke oghere ojii.
isi mmalite: sciencenews.org
Ihe onyonyo ozo nke NASA gosiputara n’October 2019 bu ihe ngosiputa komputa nke komputa di n’aka nke foto ahu, ya mere abughi ezigbo onyo, kama eserese.
Ogwe ojii na-adọta ma na-anabata ihe niile, dịkwa ka ụfọdụ, ọ ga-abụ ọnụ ụzọ nke akụkụ ndị ọzọ. Echiche ndị a bụ ihe a na-atụghị anya ya, n'ihi na ajụjụ bụ: olee ebe ihe ahụ niile dị?
Anyị maara ugbu a (site na okpukpu abụọ nnwale nnwale) ihe ahụ naanị na-ahụ maka nghọta na n'ihi ya, naanị ihe dị na ụwa niile dị site na nghọta; nghọta sitere 'ọnọdụ nsụhọ'. Site na oghere ojii, a gaghị ahụta ihe mberede na mberede, nke enwere ike iji ya na pixel nwụrụ anwụ na enyo. Lawsfọdụ iwu ebumpụta ụwa na-etinye n'ọrụ maka ịme anwansị, agbanyeghị, na ụgwọ ọkụ eletrik dị na mbara igwe bụ ihe Einstein agaghị agụta. Na nkwadebe maka akwukwo a, odi nkpa inyocha ihe a.
Echiche nke ụwa dị oke iche iche bụ ihe efu na-etinye echiche ndị na-eche echiche dị egwu n'akụkụ nkuku
Eluigwe na ụwa bụ ntụgharị okwu na asụsụ Hibru nwere koodu maka geometry nkịtị
Kedu otu NASA si agba mbọ ime ka eluigwe na ala too
"Eziokwu dị ka anyị si ghọta ya" akwụkwọ Martin Vrijland dị ugbu a
Tags: David Talbott, eletrik, agba, kpoo, oghere, Immanuel Velikovsky, NASA, plasmoid, Oru ngo, Mahadum, Wal Thornill, nwa, nwa
3 November 2019 na 17: 58
Agaghị m atụgharị uche n'ihe niile nke NASA wepụtara, egosipụtagoro ya ọtụtụ oge n'oge gara aga na ha na-eji foto na ihe nkiri vidio eme ihe. Banyere einstein, Tesla ghọtara watụ mma
3 November 2019 na 22: 27
N’ezie ị ghagh ị enyocha ihe niile site na Nasa ma chọpụta ya ugboro abụọ. Enweela ndị nduzi dịka Billy Wilder na Stanley Kubrick ndị ghaworo ụwa ụgha taa site na-edezi ihe onyonyo na aghụghọ. Ma enweghi ike ikwu ihe ọ bụla gbasara ya.
4 November 2019 na 02: 34
Ihe mkpuchi Tesla na ụdị a na-akpọ Hutchinson egosilarị na ọkụ eletrik na-eme ka gburugburu ebe anyị dị ọkụ ma ya mere na mpaghara ike. Ike zero na-atọ ụtọ igwu egwu.
" Ugboro abụọ igbu ọchụ nke Gina na Marinus na cinema Proné Groningen
Lọ ọrụ ndị ntorobịa na-eme mkpọtụ banyere ime ihe ike n'ihi na 'nlekọta' bụ n'ezie mmetọ? »
Onye na-azụ ahịa
Ndị ọbịa kwa July 2017
Nleta nile: 13.919.384
Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya
Robert Jensen "Donald Trump ekweghị na New World Order" na-egosi: Jensen.nl bụ ndị mmegide na-achịkwa
Mmegide a ha amalitela? Enyerelarị mmụọ ọgụgụ isi na 2018 dabere na ikpe Els Borst / Bart van U.
Onye akaebe na-ahụ maka okpueze na egwuregwu dị n'etiti mpụ steeti na onye nnọchi anya (ọkàiwu Meijering megide Plasman)
Nzọụkwụ mbụ bụ akara, nzọụkwụ nke abụọ bụ nwepu: bọtịnụ ịgba ọgwụ mgbochi
Martin Vrijland op Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya
Mmiri op Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya
SalmonInClick op Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya
Marga op Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya
Nwelite ụbọchị site na e-mail
Jikọọ ndị 1.683 ndị ọzọ debanyere aha